CORONAVIRUS ma foga ee maxaa hadda dad iyo dowlad la gudboon? – Radio Daljir
CORONAVIRUS ma foga ee maxaa hadda dad iyo dowlad la gudboon?
Febraayo 28, 2020 6:44 g 0
Cudurka Coronavirus waa cudur astaamihiisu ay u egyihiin kuwa dureyga oo xummad, qandho, qufac iyo hindhiso wata. Haddii aan cudurka qofka laga baarin illaa uu qofka soo rito lama garan karo in uu yahay hargab ama uu yahay Coronavirus.
Illaa iyo hadda si sax ah looma garan karo boqoleyda dhimashada cudurka maxaa yeelay waa cudur cusub oo dalalka qaar xataa aan weli dadkii la karantiilin, lana ogeyn inta uu dhimatay iyo inta la nool. Xataa magaalooyinka kala duwan ee Shiinaha ayaa dhimashadu kala duwantahay, laakiin WHO ama Hay’adda Caafimaadka Adduunka waxa ay hadda qiyaastay in dhimashadu tahay 2% (waa iska qiyaas), laakiin cisbitaalada qaar waxa ay sheegayaan in dhimashadu tahay ugu yaraan 15%.
Aan u soo laabano PUNTLAND iyo SOOMAALIYA guud ahaan e maxaa nala gudboon si uusan cudurkaas maanta SOOMAALI u harqin?
1. Dadka soodhaweeya madaxda iyo masuuliyiinta la socda diyaaradaha dalka dibaddiisa ka yimaada ha joojiyeen safka ay u galaan salaanta masuuliyiinta. Salaanta iyo hindhisada hal qof oo jirran baa dhammaan dadka meeshaas isa soo dhoobay cudurka ku faafin kara
2. Hubinta qofka imaanayaa ha ka bilaabato marka diyaaradda laga soo dego oo yeysan ka bilaaban marka uu dhismaha eeroboorka soo galo, haddii kale cudurkiiba faaf
3. Dowladdu ha biloowdo tababarka dadkii hawshaas qaabili lahaa oo sidii Soomaali looga bartay yeysan hadal iyo “saas ha la yeelo noqon.” Halkudhigga dowladdu hadda ha noqdo TABABAR, TABABAR, TABABAR iyo diyaargaroow!
4. Dadka ka shaqeeya gegida diyaaradaha ayaga ha laga bilaabo oo ha la hubiyo in ay caafimaad qabaan, hana la baro sida si joogto ah gacmaha iyo calaacalaha loo dhaqdo, looguna dhaqo saabuun (waa hubaal in tani ay Soomaali badan dhib ku tahay, laakiin waa in la baro)
Dhanka SHACABKA & GANACSATADA
1. Ganacsatadu ha bilaabeen ka gancsiga qalabka gacmaha (gloves) iyo afka (facemask) lagu xirto iyo waliba kan gacmaha lagu dhaqo
2. Shacabku ha joojiyeen salaanta iyo marxabeynta dadka la socda diyaaradaha dibadda ka yimaada, haddii kale ayana khatar ayey ku suganyihiin, cudurkana waa sii faafin karaan
3. Gacmaha dhaqo, ha ku quficin hana ku hindhisin dadka hortiisa, oo ku qufuc maro haddii aadan haysanna ku hindhis ama ku qufac gacantaada. Iska ilaali in aad jeermiska hawada galiso, oo hubi in aad gacmaha iyo calaalahaba si joogto ah isaga dhaqdo, adoo ku dhaqaya saabuun
Ugu danbeyn, cudurka Coronavirus waa halis adduunka ku soo korortay, maantana PUNTLAND aysan ka jirin xarun dadka lagu karantiilo, marka is ilaali, nadaafaddaada ilaali, haddii ay xummad daran ama qandho ku qabatana degdeg u arag dhakhtar. Ha qarin qof cudurka qaba, haddii kale waxa aad si ku talagal ah cudurkii ugu faafisay carruurtaada, ehelkaaga iyo ummadda oo dhan.
Maqaalo Kale 310 Wararka 21332
Warka Arooryo iyo Cabdinaasir Ibraahim Maxamed (dhegayso)
Wasiir Gallan: “Somaliland jawaab degdeg ah ayey kala kulmi doonaan duulaanka ay nagu soo qaadeen” (daawo)